C8600 အ​တွက်​ ​2.2 Firmware(RISE) - MYSTERY ZILLION
C8600 အ​တွက်​ ​2.2 Firmware(RISE)
zarnilee June 2011 edited June 2011 in Android ဒီ​ Firmware က​ကျွန်​တော်​လက်​ရှိ​သုံး​နေ​တဲ့​ firmware ပါ။​ (2.2 RISE version)မူ​လ​ 2.2.1 ထက်​ပို​လှ​တယ်။​ ပို​လည်း​မြန်​တယ်။​သူ​က​မူ​လ​ original firmware , update လုပ်​သ​လိုupdate လုပ်​လို့​မ​ရ​ဘူး။​recovery mode က​နေ​သွား​မှ​ရ​မှာ​။screenshot ကို​ ဒီ​link မှာ​တင်​ထား​တယ်။​http://dl.dbank.com/c0jg2zk3jiFirmware ကို​ ဒီ​မှာ​ download လုပ်​ပါ။​http://dl.dbank.com/c0s8ue528d Tagged:
lower9 June 2011 edited June 2011 Registered Users Firmware Update လုပ်ပုံ လုပ်နည်းလေး ပြောပြပေးပါအုံး ... 2.2.1 froyo တင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ အတူတူပဲလား မသိဘူး ... yewinshein June 2011 Registered Users ကျနော်တစ်ခုအကူအညီတောင်းပါရစေခင်ဗျာ။ဒီ 2.2 rise version အပါအဝင် အခြား ဗားရှင်းတွေလဲ တင်လည်းတင်ဖူးပါတယ်။အာင်လဲအောင်မြင်ပါတယ်။၄လပိုင်းအစလောက်ကစဝင်လာတဲ့ 8600 တွေမှာ (အထူးသဖြင့်dload နဲ့တင်လို့မရတဲ့အလုံးတွေ) မှာဒီနည်းနဲ့ပဲတင်လို့ရတာpro တွေအားလုံးသိမှာပါ။ ပြသနာက အဲဒီအလုံးတွေမှာ အင်တာနက် အတွက် APN settingကြီးလုံးဝပျောက်နေတာ ကြီးကိုဖြေ ပေးကြစေ ချင် ပါတယ်။ jamesmith June 2011 Registered Users yewinshein said:ကျနော်တစ်ခုအကူအညီတောင်းပါရစေခင်ဗျာ။ဒီ 2.2 rise version အပါအဝင် အခြား ဗားရှင်းတွေလဲ တင်လည်းတင်ဖူးပါတယ်။အာင်လဲအောင်မြင်ပါတယ်။၄လပိုင်းအစလောက်ကစဝင်လာတဲ့ 8600 တွေမှာ (အထူးသဖြင့်dload နဲ့တင်လို့မရတဲ့အလုံးတွေ) မှာဒီနည်းနဲ့ပဲတင်လို့ရတာpro တွေအားလုံးသိမှာပါ။ ပြသနာက အဲဒီအလုံးတွေမှာ အင်တာနက် အတွက် APN settingကြီးလုံးဝပျောက်နေတာ ကြီးကိုဖြေ ပေးကြစေ ချင် ပါတယ်။
if U can used 2.3.4 version , open vioce dailer and then u say open apn. zarnilee June 2011 Registered Users အ​ရင်​ဆုံး​ ClockWorkRecovery ကို​ download ချ​ပါ။​နောက်​ phone ကို​ ပိတ်ပါ။​ ဖုန်း​ကို​ usb cable နဲ့​ ကွန်​ပျူ​တာ​နဲ့​ချိတ်​ပါ။​ နောက်​ဖုန်း​ချ​တဲ့​ခ​လုတ်​နဲ့​ အ​သံ​တိုး​တဲ့​ခ​လုတ်​တွဲ​နှိပ်​ထား​ပြီး​ power ခ​လုတ်​နှိပ်​ထား​ပါ။​ (ခ​လုတ်​အား​လုံး​မ​လွှတ်​ပါ​နဲ့​)။နောက်​ ClockWorkRecovery unzip လုပ်​ထား​တဲ့​ထဲ​က​ "install-recovery-windows" ဆို​တဲ့​ batch file ကို​ run ပါ။​ ဖုန်း​က​ auto-restart လုပ်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်​ (မ​ဖြစ်​ရင်​တော့​ ဘတ်​ထ​ရီ​ ဖြူတ်၊​ ပြန်​တပ်​ပေါ့​)။နောက်​ ဖုန်း​ကို​ power ပြန်​ဖွင့်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ​ ဖုန်​ကိုင်​တဲ့​ခ​လုတ်​ (ဘယ်​ဖက်​ဆုံး​က​ခ​လုတ်​) နဲ့​ အ​သံ​ကျယ်​တဲ့​ခ​လုတ်​တွဲ​နှိပ်​ထား​ပြီး​ power ခ​လုတ်​နှိပ်​ဖွင့်​ပါ။​ ခု​န​က​လို​ပဲ​ recovery ထဲ​မ​ဝင်​မ​ချင်း​ ခ​လုတ်​မ​လွှတ်​နဲ့။​"wipe cache partition" ကို​ရွေး​ပါ။နောက်​ "wipe data/factory reset" ကို​ရွေး​ပါ။​​နောက်​ "install zip from sdcard"-"choose zip from sdcard"-(ကိုယ့်​ file ရှိ​တဲ့​နေ​ရာ​ကို​ရွေး​ပေး​ပါ။​)။ (zip file ကို​unzip လုပ်​စ​ရာ​မ​လို​ပါ။​)install လုပ်​မ​လား​ရွေး​ရင်​ yes။အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင်​ reboot ပြန်​လုပ်​ပေး​ပါ။​PS - firmware မ​တင်​ခင်ကိုယ့် ​​data တွေ​အား​လုံး​ backup လုပ်​ထား​ပါ။​ yewinshein June 2011 Registered Users jamesmith said:if U can used 2.3.4 version , open vioce dailer and then u say open apn. စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျနော်ကို က တုံးတာပါ။မြန်မာလိုလေးရေးပြရင်အရမ်းအဆင်ပြေမှာပဲ။ lower9 June 2011 Registered Users yewinshein said:ကျနော်တစ်ခုအကူအညီတောင်းပါရစေခင်ဗျာ။ဒီ 2.2 rise version အပါအဝင် အခြား ဗားရှင်းတွေလဲ တင်လည်းတင်ဖူးပါတယ်။အာင်လဲအောင်မြင်ပါတယ်။
ဘယ် ဗားရှင်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေတယ် ဆို တာကို လဲ ပြောပြပေးပါအုံး ... yewinshein June 2011 Registered Users ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တတ်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါ။တရုတ်လိုတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းပေးတဲ့ဖိုင်လေးတွေနဲ့ပါ။၁။ C8600_Rise110413 2.2၂။C8600_Rise110531刷机包 2.2၃။C8600_0513_blue+ 2.2၄။C8600_edener_B279B280_2.2၅။C8600_3月后解决激活也能帮助刷2.3.3၆။C8600_C8600-CM7-2.3.4-ForB279-B280 USB dload နဲ့တင်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေကို အပေါ်က custom rom တွေနဲ့စမ်းတင်ဘူးတာပါခင်ဗျ။error အနဲဆုံး rom က (၄။C8600_edener_B279B280_2.2) ပါ။သူကထုံးစံအတိုင်း fm မပါတာရယ်live wallpaper တင်လို့မရတာကလွဲရင် APN setting အဆင်ပြေတဲ့ကျနော့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောrom လေးပါ။သူဘယ်ကနေဒေါင်းလဲမသိသလိုဘယ်လိုတင်ရတယ်လို့မပြောပဲဖိုင်ကြီးပဲပို့လိုက်လို့တော်တော်အိပ်ရေဒပျက်သွားသေးတယ် yemyintmagic July 2011 Registered Users C8600 2.3.4 upgrade လုပ်နည်းအသေးစိပ်တင်ပေးပါ။ heartless^devil August 2011 Registered Users Huawei C8600 အတွက် CM7-2.3.4 download link ပါ။ ===> http://dl.dbank.com/c0jc4q7o8lC8600-CM7-2.3.4ForB279B280.zip ဆိုတဲ့ဖိုင်ရလာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဖိုင်ကို zip အတိုင်းပဲ SD card ထဲထည့်ထားပါ။မသုံးခင် ကြိုပြောထားပါရစေ.. Language က Chinese ပါ။ language ကို English ( United State ) ပြောင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက် သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့် Data တွေကို backup တော့လုပ်ထားကြပါ။နောက် APN နဲ့ FM မရပါဘူး. ကျန်တာအကုန်အဆင်ပြေတယ်။တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာက Model Number မှာ C8600 မဖြစ်တော့ဘူး . Huawei Ascend ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။လိုင်းဆွဲအားလည်းကောင်းတယ်။ အသံထွက်လည်း ကြည်တယ်။ အသံပြဲပြဲတွေ ၀ူးဝါးဝူးဝါးတွေလည်း ဖြစ်မနေပါဘူး။ အစ်ကိုတို့အတွက် သုံးဖို့ အဆင်ပြေမှ သုံးပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ APN နဲ့ FM က ကျွန်တော့်အတွက် အသုံးမလိုဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ သုံးထားတယ်။အရင်ဆုံး ClockWorkRecovery ကို သွင်းထားဖို့ လိုပါမယ်။CWR Recovery ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။ ---> http://www.mediafire.com/?egzfp41ti4l84e4install လုပ်နည်းကို အပေါ်မှာ kozarni ရှင်းပြထားပါတယ်။ install ပြီးသွားရင် ဖုန်းကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။CWR Recovery ကို Mode ကိုဝင်ဖို့အတွက် ဖုန်းကိုင်တဲ့ခလုပ် + Volume ချဲ့တဲ့ခလုပ် + Power ရယ်တွဲနှိပ်ရမှာပါ။အရင်ဆုံး ဖုန်းကိုင်တဲ့ ခလုပ်ကို ဖိ + နောက် Volume up ကို ဖိ + Power ကို နောက်ဆုံးမှ ဖိပါ။ အားလုံးမလွတ်ပါစေနဲ့။၁၀ စက္ကန့်လောက်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ CWR Mode တက်လာပါလိမ့်မယ်။"wipe cache partition" ကို wipe လုပ်ပေး။"wipe data/factory reset" ကို လုပ်ပေး။အဲ့နှစ်ခုပြီး "install zip from sdcard"-"choose zip from sdcard" ကိုနှိပ်ပြီး C8600-CM7-2.3.4ForB279B280.zip ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။install လုပ်ပြီးရင် Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ update လုပ်ပုံကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဖုန်းပြန်တက်လာရင် တရုတ် language ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကို Setting ထဲက A ဆိုတဲ့ icon ပုံပါတဲ့နေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးကတရုတ်စာကို နှိပ်ပါ။ English ( United State )ကို ရွေးပေးလိုက်။ ပြီးရင် Reboot လုပ်ပေးလိုက်။ ပြန်တက်လာရင် English language ဖြစ်သွားပါပြီ။ smilelay August 2011 Registered Users My phone model is c8600. When i upgrade 2.1 to 2.3.5, it says '' Your phone need to activate''. So i downgrade to 2.2 , 2.1 . But my phone can't call phone line. Please help me! Firmware downgrade is ok!Plz tell me the way to get the phone line in my phone! sameko September 2011 Registered Users try this.I have experienced the same problem too when I installed CM7 2.3.5 Eng version.There wasacross instead of phone signal bars.this is how I solved ;I first installed ROM Manager on my friend C8600 .Then I ran it and backup current rom.I named it "Original 2.1".There appearsafolder named "clockworkmod" .I copied it to my sd . Then(1) i installed ROM Manager on my phone and ran it.(2)Flash Clockworkmod Recovery .(3)go to Manage and Restore Backups and select the "Original 2.1" .......It automatically rebooted and everything is working well again.....you can try if you wish .Note. .This method of using ROM Manager can also be used to go to CWR Recovery instead of using CALL KEY+VOLUME UP+POWER button combination. :) htun2oo September 2011 Registered Users [quote="heartless^devil"]Huawei C8600 အတွက် CM7-2.3.4 download link ပါ။ ===> http://dl.dbank.com/c0gjc4q7o8lC8600-CM7-2.3.4ForB279B280.zip ဆိုတဲ့ဖိုင်ရလာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဖိုင်ကို zip အတိုင်းပဲ SD card ထဲထည့်ထားပါ။မသုံးခင် ကြိုပြောထားပါရစေ.. Language က Chinese ပါ။ language ကို English ( United State ) ပြောင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက် သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့် Data တွေကို backup တော့လုပ်ထားကြပါ။နောက် APN နဲ့ FM မရပါဘူး. ကျန်တာအကုန်အဆင်ပြေတယ်။တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာက Model Number မှာ C8600 မဖြစ်တော့ဘူး . Huawei Ascend ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။လိုင်းဆွဲအားလည်းကောင်းတယ်။ အသံထွက်လည်း ကြည်တယ်။ အသံပြဲပြဲတွေ ၀ူးဝါးဝူးဝါးတွေလည်း ဖြစ်မနေပါဘူး။ အစ်ကိုတို့အတွက် သုံးဖို့ အဆင်ပြေမှ သုံးပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ APN နဲ့ FM က ကျွန်တော့်အတွက် အသုံးမလိုဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ သုံးထားတယ်။အရင်ဆုံး ClockWorkRecovery ကို သွင်းထားဖို့ လိုပါမယ်။CWR Recovery ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။ ---> http://www.mediafire.com/?egzfp41ti4l84e4install လုပ်နည်းကို အပေါ်မှာ kozarni ရှင်းပြထားပါတယ်။ install ပြီးသွားရင် ဖုန်းကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။CWR Recovery ကို Mode ကိုဝင်ဖို့အတွက် ဖုန်းကိုင်တဲ့ခလုပ် + Volume ချဲ့တဲ့ခလုပ် + Power ရယ်တွဲနှိပ်ရမှာပါ။အရင်ဆုံး ဖုန်းကိုင်တဲ့ ခလုပ်ကို ဖိ + နောက် Volume up ကို ဖိ + Power ကို နောက်ဆုံးမှ ဖိပါ။ အားလုံးမလွတ်ပါစေနဲ့။၁၀ စက္ကန့်လောက်စောင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ CWR Mode တက်လာပါလိမ့်မယ်။"wipe cache partition" ကို wipe လုပ်ပေး။"wipe data/factory reset" ကို လုပ်ပေး။အဲ့နှစ်ခုပြီး "install zip from sdcard"-"choose zip from sdcard" ကိုနှိပ်ပြီး C8600-CM7-2.3.4ForB279B280.zip ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။install လုပ်ပြီးရင် Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ update လုပ်ပုံကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဖုန်းပြန်တက်လာရင် တရုတ် language ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါကို Setting ထဲက A ဆိုတဲ့ icon ပုံပါတဲ့နေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အပေါ်ဆုံးကတရုတ်စာကို နှိပ်ပါ။ English ( United State )ကို ရွေးပေးလိုက်။ ပြီးရင် Reboot လုပ်ပေးလိုက်။ ပြန်တက်လာရင် English language ဖြစ်သွားပါပြီ။ bcodblack January 2012 Registered Users How to downgrade cm7 to 2.1 ?Please help me .. theinlinaung2010 January 2012 Registered Users Please post clockworkmod recovery and rise version for C8500. thet_naing_mg January 2012 Registered Users CWR recovery ကို run တာ blue screen တက်လာ ပီး ဘာမ လုပ်မရတော့ပါ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ disscuss လုပ်ပေးပါအုံး soeminhtet February 2012 Registered Users အကို တို့ရေ....C8500 ကိုရော version 2.2.1 update lote ပီး APNs setting ရ အောင်ဘယ်လိုလုပ် ရလည်းကူညီပါအုံး..ကျွန်တော့် ဖုန်း update lote ပီး internet use လို့မရတော့လို့... lynndroid March 2012 Registered Users zarnilee said:ဒီ​ Firmware က​ကျွန်​တော်​လက်​ရှိ​သုံး​နေ​တဲ့​ firmware ပါ။​ (2.2 RISE version)မူ​လ​ 2.2.1 ထက်​ပို​လှ​တယ်။​ ပို​လည်း​မြန်​တယ်။​သူ​က​မူ​လ​ original firmware , update လုပ်​သ​လိုupdate လုပ်​လို့​မ​ရ​ဘူး။​recovery mode က​နေ​သွား​မှ​ရ​မှာ​။screenshot ကို​ ဒီ​link မှာ​တင်​ထား​တယ်။​http://dl.dbank.com/c0jg2zk3jiFirmware ကို​ ဒီ​မှာ​ download လုပ်​ပါ။​http://dl.dbank.com/c0s8ue528d
ကျွန်တော် လိုက်စမ်းကြည့်နေတာ တစ်ခုမှ အဆင်မပြေဘူး၂.၃.၅ ကလည်း ဝိုင်ဖိုင် မရဘူး(2.2 RISE version) လေးတင်မလို့ လုပ်တော့လည်း တင်မရရာဖိုင်ကို ဖြည်လိုက်တော့ ဇစ်ဖိုင်နှစ်ခုတောင်တွေ့တယ်၂ ခုလုံးကိုတင်ကြည့်တာပဲတစ်ခုမှမရဘူးဗျာအခုအချိန်မှဒီအကြောင်းပြောရတာက ဟမ်းဆက်မပြောင်းနိုင်သေးခင် ဗားရှင်းလေးပြောင်းပြီးအဆင်ပြေပြေသုံးချင်လို့ပါ StoneAge July 2012 Registered Users သရီးဂျီနဲ့ ဝိုင်ဖိုင် အဆင်ပြေမယ် ဗားရှင်းလေးကို သိချင်ပါတယ်။ :) titegarlay August 2012 Registered Users please help me.my c8600 was changed to 2.24 version .but i cannot touch any button on the screen.please tell me about changing original version .please.............. KaungKhantKo December 2012 Registered Users ကြှနျျတော့ျ c8600 ကို ကှနျပြူတာကလုံးဝမတှေ့ဘူး...ကုနျကုနျပွောမယျဗြာ.. Unknown Device တောငျမဖွဈဘုူး...အဲဒါ CWM ကိုဘယျလိုသှငျးရမှာလဲ ??? oakermobile April 1 Registered Users အကိုေရ ကူညီပါဦးဗ်ာ 280 အတြက္တင္ေပးပါဗ်ာ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla